NSOGBU IGBO - GAGHARA ANYA
Emepụtara ìgwè K-pop ọhụrụ a na AI na teknụzụ miri emi - BGR
Onye ọchịchị aka ike North Korea Kim Jong-un nwere ike iwe iwe katọọ K-pop dị ka "ajọ ọrịa kansa" ihe ọ bụla ọ chọrọ. Ọ bụghị naanị na egwu pop aghọwo otu n'ime mbupụ ọ hụrụ n'anya nke ndị agbata obi ya…
Izu nke June 13 - BGR
Nke a nwere ike ịbụ otu n'ime izu kachasị maka nhapụ ọhụrụ na Netflix ruo ugbu a na 2021. Isii Netflix mbụ usoro mbụ laghachi n'izu a, gụnyere Elite (oge 4), Ndị nne Who
24 nnukwu nkwupụta sitere na Netflix's Geeked Week 2021
Netflix ka kpuchitere izu nke mbụ Geeked Week, nke ọ kọwara dị ka "ihe omume mmemme ọhụụ na-ekpughe anya mbụ ma na-eme ihe niile gbasara ntụrụndụ na Netflix." Gee Gee ...
E nwere ihe ọhụrụ 'Lord of the Rings' prequel nkiri na-akụ ihe nkiri - BGR
Chineke nke Mgbaaka: Agha nke Rohirrim ga-abụ Tolkien mbụ egwuregwu ihe nkiri na JRR's Middle-Earth ebe Hobbit: Agha nke ndị agha ise ahụ pụtara na 2014, mana n'adịghị ka ọ bụla…
"Loki" ka mere nnukwu ihe omimi "Endgame", mana ugbu a anyị nwedịrị karịa…
Loki dị na Disney +, ọ bụkwa MCU Phase 4 na-egosi ọtụtụ ndị egwu enweghị ike ichere ịhụ. Ihe ngosi ohuru ohuru abughi ihe uto n’ihi na Loki (Tom Hiddleston) na-alaghachi na MCU ...
Ọ bụ na June 9, nke pụtara na mbụ ihe omume nke Loki bụ n'ikpeazụ dị iji strimụ na Disney +, na ị kwesịrị ị na-ele ya mgbe ọ bụla ị nwetara ohere. Ihe nkiri TV a na-atụ anya ya na-eburu ebe anyị ...
Lelee nkeji 4 nke "Loki" ebe a tupu ọhụụ ọhụụ Disney gosipụtara pụtara uts
Usoro nke atọ dị ịtụnanya nke mbụ na Disney + bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ ihe omume MCU TV a na-atụ anya ya na ọrụ ntanetị na afọ a. Tom Hiddleston's Loki abụwo ihe dị egwu maka ịtụnanya kemgbe…
Izu nke June 6 - BGR
Karịa ihe ọ bụla, enwere m obi mgbawa na Portlandia na-ahapụ Netflix n'izu a. O nwere ike ọ gaghị enweta anya dị ka Amis ma ọ bụ Seinfeld ma ọ bụ Ọfịs ahụ, mana ọ bụ ihe ọchị dịka nke ọ bụla n'ime ihe ngosi ndị ahụ…
Netflix kagbuchara usoro $ 200 a mgbe otu oge gachara - BGR
Na mbido Eprel, anyị kwuru maka otu Jupiter Legacy comic na-abịanụ nwere ike isi bido eluigwe na ala cinematic nke Netflix. Ihe nkiri ahụ gosipụtara oge mbụ malitere na ...
Lee ndị niile nnukwu fim na-egosi na-abịa Disney + a n'oge okpomọkụ
Dika anyi nwere obi uto dika anyi nile gha agaghachi na ihe nkiri a n’oge oku, otutu ihe g’enwe ulo iji dozie n’elu ihe ndina ya. Anyị amataworị banyere ndepụta ogologo nke ihe nkiri nke Warner Bros. onye ga - eme ihe ha ...
1 2 3 ... 101 esote